Gini mere onodu okpomoku nke uwa ji buru agha nde 56 gara aga? | Network Meteorology
Fọdụ ndị amabeghị na okpomoku zuru ụwa ọnụ a anyị na-ahụta taa bụ oge izizi emere ya n’ụwa. Mana, enwere ọtụtụ okpomoku zuru ụwa ọnụ na mgbanwe ihu igwe emeela na ụwa anyị kemgbe ụwa. Ihe dị mkpa ikwu bụ na ọ nweghị okpomoku zuru ụwa ọnụ mere n'oge gara aga Ọ dị ka obere oge dị ka nke ugbu a. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụ mmadụ, ya na ọrụ ya na-emerụ emerụ, na-eme ka usoro nke okpomoku zuru ụwa ọnụ na-eme ka ngwa ngwa n'ihi ikuku ọkụ gas.
Ihe dị ka nde 56 afọ gara aga, ụwa tara oke okpomoku zuru ụwa ọnụ, nke a maara maka ya Nke Paleocene-Eocene Kwesara Nke kachasị (MTPE, ma ọ bụ PETM maka aha njirimara ya n'asụsụ Bekee). You chọrọ ịma ihe kpatara ụdị okpomoku a nke ụwa niile?
1 Okpomoku di n’uwa n’abuo nde 56 gara aga
2 Ihe kpatara okpomoku uwa
3 Nyocha na nha
Okpomoku di n’uwa n’abuo nde 56 gara aga
N’oge ahụ, ụmụ mmadụ abịabeghị, yabụ na anyị enweghị ike ịbụ ihe kpatara ọkụ dị n’ụwa a. Maka ndị na-eche na nke a bụ ihe okike na ụwa na-ata ahụhụ site n'oge ruo n'oge okpomoku zuru ụwa ọnụ nke na-eduga na mgbanwe ihu igwe, na nke a bụ ihe nkịtị, ọ dịghị otú ahụ.
Ọ bụ eziokwu na kemgbe ọtụtụ nde afọ ndị ọzọ, ụwa tara ahụhụ site na mmụba na-atụghị anya ya na ọnọdụ okpomọkụ na mgbanwe ihu igwe, mana o meela ya ọtụtụ puku afọ na puku afọ. Na mgbanwe ihu igwe anyị ugbu a, ya mere ọ dị ihe dị ka afọ 250 kemgbe mgbanwe usoro mmepụta ihe malitere na ikuku gas na-amalite ịmalite.
Ihe dị ka nde afọ 56 gara aga, nnukwu ikuku carbon dioxide (CO2) a na-agbanye n'igwe nkịtị mere ka ọ̀tụ̀tụ̀ ikpo ọkụ rịa elu n'ụwa nile. The Paleocene-Eocene Thermal Maximum bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na ihe omume metụtara ọsọ ọsọ na okpomoku zuru ụwa ọnụ na mbara ala anyị enweela ihe dị ka nde afọ 66 gara aga. Okpomoku nke uwa diri ihe dika aro 150.000, na okpomoku zuru uwa jiri ihe dika 5 Celsius rita elu, onu ogugu kari ufodu amuma ndi emere maka onodu ubochi nke oge a kariri njedebe nke a.
Ihe kpatara okpomoku uwa
Ọnọdụ ụwa a na-ekpo ọkụ dị nnọọ na mberede na ọ bụghị ụmụ mmadụ kpatara ya. Ya mere, olee ihe nwere ike ịkpalite ịrị elu dị otú ahụ na okpomọkụ gburugburu ụwa? Akwadoro ya na ndị ọkà mmụta sayensị na ọ bụ ya kpatara ya ịgbanye carbon n'ime oké osimiri na ikuku, ihe na-ebute ihe kachasi ike, isi iyi nke carbon a, na ego zuru ezu ewepụtara, amabeghị.
Agbanyeghị, olee ebe ụdị CO2 dị ga-abịa site na ogo nke ụwa dum na-abawanye site na 5 Celsius C na nkezi? Nyocha nke otu Marcus Gutjahr nke mba ụwa mere, na mbụ Mahadum Southampton dị na UK ma ugbu a na GEOMAR (Helmholtz Center maka Nnyocha Osimiri) na Kiel, Germany na-enye echiche na ọ nwere ike ịbụ n'ihi nsị nke gas site na mgbawa ugwu mgbawa.
Ruo taa, ugwu mgbawa anaghị aza maka mmụba nke ikuku gas, yabụ ọ bụ ihe ziri ezi iche na n'oge gara aga ọ bụghị. Otú ọ dị, a ghaghị iburu n'uche na ọrụ mgbawa ọtụtụ nde afọ gara aga na-agakarị ma na-efe karịa ka ọ dị taa.
Nyocha na nha
Iji chọpụta ihe kpatara ihe ọkụkụ CO2, e jiri nchikota nke ihe omumu ohuru na usoro ihu igwe zuru ụwa ọnụ, na-achọpụta na oke okpomoku zuru ụwa ọnụ kpatara site na okpukpu abụọ nke ikuku nke ikuku CO2. Mgbe anyị kwuru okwu ahụ ọsọ ọsọ anyị na-ezo aka n'oge na-erughị afọ 25.000 (Ọ bụ ya mere na anyị enweghị ike iji ya tụnyere okpomoku ụwa a na nke ugbu a, nke dị anya na ya), na ugwu mgbawa bụ ndị na-eme mpụ nke ihe ndị a.
Tụkwasị na nke a, enwere ike ịkwado ya n'ihi eziokwu ahụ bụ na n'oge a ma ọ bụ na-erughị oge dabara na nhazi nke nnukwu ndọtị nke akwa osimiri nke basalts, n'ihi nnukwu lava na-agbasa na ala. Ihe ndị a mere mgbe Greenland malitere ikewapụ na northwest Europe, na-eke North Atlantic Ocean.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Gini mere o jiri di na okpomoku uwa dum Nde 56 gara aga?